Somalitalk.com Online Community - Java AfSoomaali
22 Jul 2001 - 26 Nov 2004
C++ waa casharro cusub oo oo idiin soo tebin doono C/risaaq M. Xassan oo deggan dalka Finland.
Casharadan waxay ka koobnaan doonaan 24 cashar oo taxane ah, insha Allah.
C/risaaq waxaa lagala xiriiri karaa
Waa cilmigii oo gurigaaga kuugu yimid ee ka faa'iideyso.
. C++ Programming
. HTML - Web design
Qore: C/risaaq M. Xassan
Dunida maanta lajoogo kumpuyuutarku wuxuu kanoqday wax kamid ah aasaaska nolosha, oo marmarka qaarkood dadku waxay isweydiiyaan su'aal ah : Kumbuyuutar la'aan noloshu see ahaan leheed?. Su'aashaan waxay kadhacdaa dunida hormartay . Dalkaan aan joogo, Finland, guri walba iyo xafiis walba waxaa yaal kumbuyuutar oo wuxuuba ka midyahay qalabka guriga ee lagama-maarmaanka ah. Soomaaliyana sidaas oo kale ayey kusocotaa! Oo hada dad badan ayuu guryaha u yaalaa.
Kumbuyuutarku waa shey waxyaalo badan loo adeegsado, hase ahaatee kumbuyuutarka laf'ahaantiisa wax badan mataree, waxaa loo baahan yahay Programs, barnaamijyo, si aad kumbuyuutarkaaga waxyaalo kaladuan aad ugu qabsatid.
Sidaas daraadeed waa muhiim in la'barto sida loo sameeyo barnaamijyada kumbuyuutarada. Barnaamijyada markii lasameenayo waxaa la'adeegsadaa luqado, languages, loogu talagalay sameynta barnaamijyada.
Halkaan waxaan ku soo bandhigayaa 24 cashar oo taxane ah oo si fudud u soo bandhigaya luqadahaas mid kamid ah, C++.
Luqadaha lagu qoro (prograamiyo) kombuyuutarka waxaa badanaa loo kala qaybiyaa labo qeybood:
Su'aashu marka waxay tahay, maxay kalayihiin labadaas qeybood.
symbolic machine language ( assembly language) waa kalimaad, ama amaro, command, ka'kooban dhowr xaraf, symbol, oo kumbuyuutarka u'sheegaya waxa laga rabo in uu qabto. Miithal: xisaabta markii labo lambar la'iskudaroyo waxaa la'isticmaalayaa amarka ah ADD, kalajarka SUB, iskudhufashada MUL.
Waxaa jira markii aad u baahato meel xasuus ah oo aad geesato lambar ama waxkale meeshaas xasuusta ah waxaad u yeeleysaa , ama siineysaa magac, sida MUSHAAR, CANSHUUR, BIIL iwm.
Kasoo qaad in aan geesatay 1000 meesha layiraahdo MUSHAAR,
meesha layiraahdo CANSHUUR 50,
Adigoo isticmaalaya symbolic machine language, waxaad qorikartaa amarkaan oo kale :
SUB MUSHAAR, CANSHUUR
Kaasoo macneheesu yahay mushaarka waxaad kajartaa canshuur. Markaas mushaarku Wuxuu noqonayaa 950.
Qaybtaan kale oo layiraahdo high level languages, sida BASIC, COBOL, C, C++ waxay u suurto galiyeen programers-ka in ay isticmaalaan ereyo iyo amaro, commands, ay dadku fahmi karaan, sida:
Let Y =100;
Kaasoo macneheesu yahay meesha xasuusta Y, waxaad ii geysaa 100.
Fiiri masawirka hoose.
Qayb xasuusta kumbuyuutarka ah.
Marak C++ waxay katirsantantahay ama tahay high level language.
Dadka program-yada sameeya (programers), waxay badanaa doorbidaan in markii ay rabaan in ay sameenayaan barnaamij, program, in ay isticmaalaan luqada C++.
Hadaad iweydiiso sababtu maxay tahay, Jawaabto waxay tahay:
Barnaamijka lagusameeyay C++ waxaa lagu ismicmaali karaa kubuyuutaro ay ku kalajiraan operating system kaladuan.
Erey bixin Program-yadu waa dhowr qaybood. Waxaase loo kalaqaybin kara labo qeybood:
1. Qayb waxaa loogu talagalay in loo adeegsado hool kufulin, sida markii aad rabtid in aad qoraal qorto ama aad cod dhaqeysato ama wax masawirto iwm.
2. Qayta kalese waxaa loo isticmaalaa maamulida kumbuyuutarka. Qaybtaani waxay mas'uul ka tahay sida markii aad damacdo in aad cajal buuxa wax ku siiduubto in ay kuu digto oo ay kuusheegto in cajalkii kaa buuxamay. Miithaal kale: markii labo program ay isku dayaan in ay iskumar isticmaalaan qayb xasuusta kumbuyuutarka ah, waa in ay jiraan wax kala saara oo u kula sheega labada program kee baa xaq u leh in uu isticmaalo qaytaas xasuusta.
Sidaas daraadeed ayaa waxaa jira qaybtaan labaad ee operating system oo ayagu ku shaqa leh maamulka kumbuyuutarka, la'aantoodna kumbuyuutarka aan la'isticmaali karin.
Intaadan cashirkii u horeeyay galin waxaa loo baahanyaha in aad …
Intaadan bilaabin barashada c++, waxaa loo baahanyahay in aad haysatid dabcan marka hore kumbuyuutar, marka labaad COMPILER ( turjume).
Waxaa markaan isweydiineysaa, Oo maxaan kufalayaa COMPILER, muxuuse yahay.
Halkaan waxaan kuu soo bandhigayaa miithaal yar oo arintaan sifiican u qeexaya : markii aad qortid amarkaan : Let I =100. Kumbuyuutarku ma fahmayo amarkaas waxaad ula jeedo. Marka waxaan u baahannahay wax noo kala turjuma anaga bini aadamka ah iyo kumbuyuutarka. Kumbuyuutarku wuxuu fahmayaa oo kaliya amaro ka'kooban eber iyo hal (0,1). Sidaas daraadeed ayaa waxaa loo baahanyahay program layiraahdo turjume( Compiler), si program-kaad qortay loogu badalo habka kumbuyuuratku fahmayo. Markaan waxay ilatahay waad fahantay sababta loo isticmaalayo compiler-ka.
Hadii aad compiler haysatid dhibaato majirto, hadii kale waxaad raad sataa turjume, sida :
Ama Mid ka mid ah turjumeyaasha Microsoft.
Kasoo qaad in aad haysato compiler-ka Borland C++, markii aad qorto program-ka (code), waa in aad sameysaa compiling( turjumid) iyo linking ( iskuxirid, isla xariirin).
Erey bixin markii aad qorto program-kaaga, (sida int I =100; cout <<" Iska waran";, iwm), si'aad wixii aad qortay uga dhigtid program shaqeynaya, waa in aad sameysaa COMPILE (turjumid) iyo link. Sababta aad ugu baahantahay in aad sameysid link , waxay tahay, code badan oo barnaajimkaagu u baahanyahay oo compiler-ku wato ayaa waxaa lagu soo darayaa code-kaaga.
Waxaan kuleeyahay kusoo dhawow adigoo maskax furan barashada luqada C++.
AKHRI CASHARKA 1aad
Powered by SomaliTalk.com
. Fri, January 18, 2002
Baro C++ Waa casharro cusub oo uu idiin soo tebin doono C/risaaq M. Xassan (insha Allah) ee ka faa'iideyso, fadlan asxaabtaadana gaarsii si ay uga faa'iideystaan.
Hadii aad u baahatid barashada HTMl, soo booqo bogga html.somalitalk.com
Guul dhammaantiin, insha Allah.
Top | FreeWebsite | FreeEmail | TellFriends | Baro HTML